Fanaraha-maso ny lalàna sy tsiambaratelo any Azia | Vahaolana OMG
Ny olana lehibe indrindra ataon'ny departemantan'ny polisy izay mampiasa fakantsary fandraisam-peo an'ny polisy manokana, dia ao anatin'ny toe-javatra mampihetsi-po, mahatsiaro ilay fakana sary. Ny tena mety, ao anatin'ny adin-tsaina, dia tsy tsaroan'ny Agent ity fa mitondra fakantsary ary noho izany dia very ny porofo marim-pototra rehetra izay tafiditra amin'ny fananana horonantsary sy firaketana horonantsary.
Ny iray amin'ireo olana ara-piarovana lehibe dia ny hoe iza no mifehy antsika ary amin'ny fomba ahoana. "Ity dia teknolojia manana ny tena mety ho fifehezana sy fanoherana ny fahefan'ny polisy,"
Saika tsy misy fitsabahana avy amin'ny polisy raha tsy misy ny fanafihana vatana: mitombo ny herisetra amin'ny polisy. Ny antsoina hoe fakan-tsary amin'ny vatana dia heverina fa manampy amin'ny fametrahana azy. Ireo fakantsary, ampiasaina amin'ny fanamiana, fanafihana an-tsoratra ary asiana fanerena, ary koa hiantohana porofo.
Azon'ny polisy atao ny mampihetsika azy ireo isaky ny misy ny fandrahonana herisetra ary any amin'ny toerana ivonin-dry zareo izy ireo. Ny tokony hataon'izy ireo dia ny fampahafantarana ilay olona voarohirohy fa hosoratana amin'ny horonantsary avokoa ny zava-drehetra. Ny ankamaroan'ny firenena aziatika dia efa mampiasa fakantsary vatana. Na dia amin'ny fanerena ireo mpiaro ny data aza, izay mahita ny zo fototra amin'ny fahatapahan-kevitra momba ny tenanao. Raha ny filazan'ny polisy dia lehibe tokoa ny vokatr'izany: maro ny mpanafika no niova, ary ny fakana am-bavany koa dia mora kokoa tamin'ny fandraketana an-tsoratra. Mandritra izany fotoana izany dia azo atao ny manamarina raha ny mpitandro ny filaminana ihany no nanao hetsika.
Ny zavatra tsara indrindra momba ny fakantsary polisy dia ny fakàn'izy ireo ny sarin'ny fivoriana ataon'ny polisy miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny vahoaka, anisan'izany ireo olona ahiahiana ho vavolombelona, ​​ireo vavolombelona ary ireo mpandalo. Ny firaketana an-tsoratra dia manampy ny antoko rehetra tsy hivadika ary mamela azy ireo hanana fahazoana fahatokisana miaraka, hahafantatra fa izay rehetra lazain'ny olona momba ilay fifaneraserana dia azo hamarinina any aoriana any.
Mety misy ihany koa ny lanjan'ny fiarovana ny besinimaro amin'ny teknolojia hafa: ny fanekena ny tarehy. Azonao atao ny mamakafaka ny toetra mampiavaka ny olona iray hampitahana azy ireo amin'ireo mombamomba voatahiry ao anaty tahiry, toy ny fahazoan-dàlana avy amin'ny Departemantan'ny Fiara Fiara. Ny "dian-tànan'ny tarehy" nomerika noforonin'ireo rafi-pamantarana sary dia azo ampiasaina hanampiana ireo olona very amin'ny aretin'i Alzheimer, ohatra, na ireo ahiahiana ho mpanao heloka bevava, na iza na iza
Ankehitriny, ny masoivoho polisy sasany dia mitady hampifangaro ireo teknolojia roa ireo, mametraka ny fakan-tsary amin'ny fakan-tsary amin'ny alàlan'ny famakafakana ny tarehy.
Izany dia hahatonga ny polisy tsirairay ho toy ny mpitsikilo.
Mahatonga ny vatana tsirairay ho toerana hanangona, hitahiry ary hamakafaka ny angon-drakitra manokana raha tsy nahazoana alalana amin'ireo lohahevitra voarakitra. Ary manao izany izy na dia tsy ahiana ho nanao ratsy aza ireo lohahevitra ireo.
Ny fankasitrahana ny tarehy, miaraka amin'ny sarin'ny fakantsary vatana, azo ampiasaina amin'ny fomba ratsy. Azonao atao ny manara-maso ny toerana misy ny olona tsirairay amin'ny fotoana rehetra ary mitahiry izany data izany ao amin'ireo firaketana maharitra ho fampiasa any aoriana. Mety ampiasaina mihitsy aza izy io ho fanaraha-maso mitohy ny fokonolona iray manontolo. Tena hevitra ratsy izany. Mety hanimba ny tanjon'ny fakan-tsary amin'ny vatana izany, izay hamerenana indray ny fahatokisan'ny polisy.
Teknolojia ny tenany ihany no haitao: fitaovana isan-karazany manatsara ny herin'olombelona. Ny fanalahidin'ny tombontsoany sy ny loza aterany dia ny lalàna manondro ny fomba hampiharana ny fahefana. Ny fakantsary vatana, ohatra, dia mety hanongotra mora, fa tsy mampitombo, matoky ny polisy raha tsy mahazo miditra amin'ireo sary fotsiny ny manamboninahitra ary raha afaka mifehy ny fampiasana azy izy ireo. Vokatr'izany, ny Departemantan'ny Polisy sy ny masoivoho sasany dia nametraka fitsipika izay mitaky ny fampahafantarana ampahibemaso ny sary nalaina tamin'ny fakantsary vatana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy taorian'ny fihaonana. Ny Lehiben'ny Fitsarana dia nanao toy izany tamin'ny herintaona tamin'ny alàlan'ny baiko fa ny masoivoho fampiharana izay mampiasa fakantsary vatana dia manome ny sarin'ireo sary ireo. Mihevitra ny volavolan-dalàna izay mandrara ny fampiasana teknolojia manaiky ny tarehy sy ny sarin'ny fakantsary vatana ny mpanao lalàna.
Ny vondrona polisy sasany dia manohitra ny volavolan-dalàna satria tsy tokony hisakana azy ireo ny fanjakana amin'ny fampiasana fitaovana izay manamora ny ady amin'ny heloka bevava sy ny fampahafantarana ireo mpandika lalàna.
Ary misy tokoa ny fifandanjana tsy maintsy tratry ny fiaraha-monina eo amin'ny fiainana manokana: ny fahalalahana amin'ny fidaboka amin'ny fanjakana amin'ny fiainana manokana ary ny fahatokisana fa ny fahitana polisy iray dia tsy midika hoe miditra amin'ny fampahalalana misy anao ao anaty tranokala nomerika. Mazava ho azy ny foto-kevitry ny fandrindrana ny teknolojia vaovao na mampatahotra, fa afaka mahazo tombony amin'ny fomba fieritreretana kokoa isika rehetra.
Ary koa, ny karazana fiambenana sasany dia natao amin'ny fiainana maoderina ary mihamahery vaika. Amin'izao fotoana izao dia afaka mandoa vola vitsivitsy ianao ho an'ny fakantsary fiarovana miorina amin'ny Internet izay afaka milaza aminao, na aiza na aiza misy anao, izay eo am-baravarana. Izany karazana teknolojia izany dia tsy ho levona.
Azonao atao ihany koa ny mizara ireo sary nakana ireo amin'ny departemantan'ny polisy eo an-toerana, izay azonao ampiasainao amin'ny tanjon'ny fiarovana anao na ny fanaraha-maso ataonao. Mpangalatra fonosana marobe maro no tratra tamin'ny fampiasana sary izay nozaraina tamin'ny polisy.
Fa ny mpampiasa an'ireo rafitra ireo ve dia takiana hizara ireo sary amin'ny polisy? Resaka hafa io. Tokony hatsangana ny lalàna mba hiantohana ny teknolojia sy ny governemanta, hanompo ny vahoaka fa tsy mifamadika amin'izany.
Ilay lalàna momba ny fandrarana ny fampiasana ny haitao famantaran-tarehy sy ny fakan-tsary ataon'ny polisy dia mitazona hatrany ny vahoaka. Fanitarana voajanahary amin'ny volavolan-dalàna tamin'ny taon-dasa mba hahazoana antoka fa afaka miditra amin'ny firaketana fakan-tsary ho an'ny daholobe ny vahoaka amin'ny farany. Izy io dia miantoka ny fiasan'ny fakantsary vatan'ny vatana araka ny kasaina hatao, hampitomboana ny fahatokisan-tena amin'ny fampiharana ny lalàna fa tsy ny famindrana ny herin'ny haitao ampahibemaso amin'ny polisy.
Ny iray amin'ireo olana ara-piarovana lehibe dia ny hoe iza no mifehy antsika ary amin'ny fomba ahoana. "Ity dia teknolojia manana ny tena mety ho fifehezana sy fanoherana ny herin'ny polisy," \_
Mety misy ihany koa ny lanjan'ny fiarovana ny besinimaro amin'ny teknolojia hafa: ny fanekena ny tarehy. Azonao atao ny mamakafaka ny toetra mampiavaka ny olona iray hampitahana azy ireo amin'ireo mombamomba voatahiry ao anaty tahiry, toy ny fahazoan-dàlana avy amin'ny Departemantan'ny Fiara Fiara. Ny "dian-tànan'ny tarehy" nomerika noforonin'ireo rafi-pamantarana sary dia azo ampiasaina hanampiana ireo olona very amin'ny aretin'i Alzheimer, ohatra, na ahiahiana ho mpanao heloka bevava, na olon-kafa.
Ny fankasitrahana ny tarehy, miaraka amin'ny sarin'ny fakantsary vatana, azo ampiasaina amin'ny fomba ratsy. Azonao atao ny manara-maso ny toerana misy ny olona tsirairay amin'ny fotoana rehetra ary mitahiry izany data izany ao amin'ireo firaketana maharitra ho fampiasa any aoriana. Mety ampiasaina mihitsy aza izy io ho fanaraha-maso mitohy ny fokonolona iray manontolo.
Tena hevitra ratsy izany. Mety hanimba ny tanjon'ny fakan-tsary amin'ny vatana izany, izay hamerenana indray ny fahatokisan'ny polisy.
Teknolojia ny tenany ihany no haitao: fitaovana isan-karazany manatsara ny herin'olombelona. Ny fanalahidin'ny tombontsoany sy ny loza aterany dia ny lalàna manondro ny fomba hampiharana ny fahefana. Ny fakantsary vatana, ohatra, dia mety hanongotra mora, fa tsy mampitombo, matoky ny polisy raha tsy mahazo miditra amin'ireo sary fotsiny ny manamboninahitra ary raha afaka mifehy ny fampiasana azy izy ireo. Vokatr'izany, ny Departemantan'ny Polisy sy ny masoivoho sasany dia nametraka fitsipika izay mitaky ny fampahafantarana ampahibemaso ny sary nalaina tamin'ny fakantsary vatana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy taorian'ny fihaonana. Ny Lehiben'ny Fitsarana dia nanao toy izany tamin'ny herintaona tamin'ny alàlan'ny baiko fa ny masoivoho fampiharana izay mampiasa fakantsary vatana dia manome ny sarin'ireo sary ireo.
Mihevitra ny volavolan-dalàna izay mandrara ny fampiasana teknolojia manaiky ny tarehy sy ny sarin'ny fakantsary vatana ny mpanao lalàna.
Fanaraha-maso ny lalàna sy ny tsiambaratelo any Azia no farany niova: Desambra 12th, 2019 by Admin